Tag: ọgbọ na-achọ | Martech Zone
Tag: chọrọ ọgbọ
Wednesday, September 23, 2020 Wednesday, September 23, 2020 Ọnye na -bụ Tricia Gellman?
Enweghị ọrụ dara na 8.4 pasent na August, ka America ji nwayọ na-agbake site na oke ọrịa a. Mana ndị ọrụ, ọkachasị ndị ọkachamara n'ahịa na azụmaahịa, na-alaghachi na mpaghara dị iche. Ọ dịghị ka ihe ọ bụla anyị hụtụrụla. Mgbe m sonyeere Salesforce na 2009, anyị nọ na-agbago Akwa Nlaazu. Echiche anyị dị ka ndị na-ere ahịa na-emetụta mmetụta akụ na ụba akụ na ụba nke mepụtara n'ụwa niile. Oge ndị a bụ oge tara akpụ. Ma
Achọsiwo atụmatụ Tony Bianco ike n'Australia ruo ihe karịrị afọ iri anọ, ugbu a, ụdị a abanyela n'ime akwụkwọ akụkọ ejiji kachasị emetụta n'ụwa na ndepụta ndị kachasị mma site na ụdị ndị Australia. Taa, ọtụtụ ndị ama ama na ụdị na US na Europe dum nwere ike ịhụ na ha na-eyi ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ Tony Bianco na ngwa. Iji nyere aka mee ka mgbasawanye mba ha na mkpa gafere ókèala, Tony Bianco na Pitney Bowes na-arụ ọrụ
Satọde, Ọgọstụ 22, 2015 Satọde, Ọgọstụ 22, 2015 Douglas Karr
Ndị na-ere ahịa na-agbanwe okwu a na-achọ ọgbọ (cho gen) maka ọgbọ na-eduga (ndu gen), mana ha abụghị otu usoro. Ndị ụlọ ọrụ nwere ndị ahịa ahịa raara onwe ha nye nwere ike itinye atụmatụ abụọ n'otu oge. Ndị ụlọ ọrụ na-enwekarị ndị ahịa na-abata iji zaghachi arịrịọ ndị ahịa na-eme na ndị otu ahịa na-apụ apụ iji tinye aka na ndu ndị ahụ sitere na mmemme ọgbọ. Ọ bụrụ na enwere ike itinye ntughari na ntanetị na enweghị mmekọrịta na ụlọ ọrụ, ọgbọ na-achọ dị oke egwu